Markhaati Furka Cabdi – Akhbaarta Wanaagsan
Markhaati Furka Cabdi
Posted on January 2, 2015 May 28, 2017 by Maroodiga
Magaceygu waa “Cabdi”. Waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo ku dhashay reer Musliin ah. Hooyadey iyo Abbahey waxay waa dad Musliin ah oo rumeysan diinta Islaanka. Anigu waxaan ku dhashay gobolka shanaad ee Itoobiya magalladda Imey.
Intii aan korayey guriga walaalidkiisa, wakhtigiisa waxaan baran jiray dugsi Quraan ah. Laakiinse intii aan korayey labaadiisa waalid waxay anigu igu soo barbariyeen sidii ay noolashooda aheyd. Waxay doonayeen inaan noqon mid xoolo dhaqado. Waxay kale oo waalidkeyga doonayeen inaan noqdo oo amino ama qaato dintii ay labaadooda amminsanayeen waa diinta Islaanka ee.
Anigu waxaan ka dhashay qoys Soomaaliyeed oo Muusliim ah. Waxaan ahay wiilka keli ah qoyskeyga. Madama aan ahay wiilka keli ah ee reerkooda labadeyda waalid waxay anaga ii geyeen dugsi Quraanka iyo hadiiska lagu barto. Ooaniguna waxaan qaatay diintii ay Abbahey iyo hooday amminsanayeen.
Markii aan dhameeyey wax barashadiisi dugsi Quraanka wuxuu ka soo tagay waddanka Itoobiya oo wuxuuna yimid waddanka Soomaaliya si u siyadsado wax baradiisa ku salaysaneed diinta Islaamka. Waxaana noqday xiroow si uu u barto cilmigii aan doonayey.
Markii aan yimid magallada Jowhar ka dib arintii wey isbedeshay. Waxaan arkay wiilashii asageyga ah oo skool aan diini aheyn aadayo oo wax barasho caadi ah galay.
Markaasi waxay danta igu ku kaliftay in aan niyadiisa beddelo oo markaasi ku biiray dugsi afka Ingariiska wax kasta lagu barto ay Hay’ada Masiixi ah laheyd.
Anigu intii u ku jiray dugsigaas wax barashadda waxaan bartay wax yaabo aad u faro badan hadii ay noqon laheyd cilmiga caadi ah iyo diintaba, siiba kan diinta Masixiga ah. Anigu waxan si weyn ula dhacay Kitaabka Qudduuska ah ee Beybalka iyo waxyabahii Ciise Masiix ku hadlay oo dhan. Oo hubaal ii noqtay oo aan door bidey inaan akhriyo kitaabkaas baybalka ah, si uu u helo xaqiiqada wax ay tahay.
Markii u muddo badan aan akhrinayey Kitaabka Qoduuska ah anaga oo barbar dhigaayo kan Quraanka ah, waxaa ii caddaaday in wax anaga iyo waliidkiisa ay muddo dhere aan aminsanayeen aysan aheyn wax aan ugu badbaadin karo cadabta. Waayo wuxuu ogaday in salaada la tukado iyo soon la soomo aan kaga badbaadiin kariin dembigeyga.
Intii aan akhrinayey Kitaabka Qoduuska ah Beybaalka iyo Quraankaba waxaan arkay in uu Ciise Masiix wax dembi ah usan laheyn laakiinse Muhammad oo ah nabiga Musliiminta uu yahay nin dembile ah oo usan asaga iska badbaadin kariin dembigiisa.
Markaasi waxaan bilabay in aan akhriyo Kitaabka qoduuska ah ee Beybalka oo ka bilaabay Kitaabka Biloowga ila iyo dhamadka Beybalka waa Muujintii Ciise Masiix oo muujiyey Yooxanaa. Lakiinse intii aan akrinayey waxaa aniga ii caddatay inaan ahay dembile oo uu bahan nahay badbaadiye iyo bixiyey iga samato bixiyo dembigeyga faraha badan.
Waayo Kitaabka Qoduuska ah wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka Rooma cutuubka 3:22-25aad.
Waxaan qoran sidatan “ waxaana weeyaan xaqnimada Ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga Ciise Masiix oo u ah in alla inta rumaysata oo dhan, waayo, kala duwanaan ma leh. Maxaa yeelay, dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah; iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcadiisa xagga madaxfurashada Ciise Masiix ku furtay, kan Ilaah u soo bixiyey inuu dhiiggiisa kafaaraggud ku noqdo xagga rumaysadka la rumaystay dhiiggiisa aawadiis, inuu xaqnimadiisa ku muujiyo dembidhaafka uu dembiyadii hore loo sameeyey ku dhaafay samirkii Ilaah”.
Sidaasi oo kale waxaa qoray nabi Ishacyaah oo ka mid ah Nabiyaddi hore markii Rabbigu u waxyooday asaga oo ka hadlayo dembinimadda dadka oo dhan.
Isna wuxuu yidhi sida ku qoran Kitaabka Ishacyaah cutuubka 53:1-7aad.
Waxaan qoran sidatan “Bal yaa warkayagii rumaystay? Oo yaa gacantii Rabbiga loo muujiyey? Waayo, isagu hortiisuu ku koray sidii geed curdan ah, iyo sidii xidid dhul engegan ka soo baxay oo kale. Isagu suurad iyo qurux aynu ku fiirinno toona ma leh, oo qurux aynu ku jeclaanno laguma arko.Isaga waa la quudhsaday, waana la diiday, oo wuxuu ahaa nin murugeed, oo xanuun bartay, waana la quudhsaday sida mid dadku wejiga ka qarsado, mana aynaan xurmayn.
Sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii, wuxuuna qaatay murugadeennii, laakiinse waxaynu ku tirinnay mid belaayo ku dhacday, oo Ilaah dilay, oo dhibaataysan.Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna, waxaana loo abareeyey xumaatooyinkeenna, edbintii nabaadiinadeennana dushiisay ku dhacday, dildillaaciisiina waynu ku bogsannay. Dhammaanteen sidii ido baynu u hallownay, midkeen waluba jidkiisuu u leexday, oo Rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan.
Isaga waa la dulmay, waana la dhibay, laakiinse innaba afkiisii ma uu kala qaadin. Isaga sidii wan la qalayo baa loo kexeeyey, oo sidii lax ku aamusan kuwa dhogorta ka xiira hortooda, isagu afkima uu furin”.
Anigu waxaan ogaaday in badbaadadeyda iyo tan bani-adanka oo dhan ay ku jirto Ciise Masiix oo keli ah. Waayo Kitaabka qoduuska ah wuxuu leeyahay ma jirto jid kale oo lagu badbaadi karo.
Bal aan ka akhriyey Kitaabka Falimaha Rasuuladda cutuubka 4:12aad.
Waxaan qoran sidatan “Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno”.
Markii aan 25 sano jir ah ayaan ogansaday inaan rumeysto in Ciise Masiix badbaadiyaheyga noqdo markii asaga u qirtay dembigeyga oo dhan, niyadeydan u furay in uu soo galo.
Sida ku qoran Kitaabka MUUJINTII CIISE MASIIX cautuubka 3:20aad.
waxaan qoran sidatan “Bal eeg, albaabkaan taaganahay oo garaacayaa; haddaba haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo, waan u soo gelayaa, oo waan la cashayn, isna wuu ila cashayn”.
Hal habeen anaga oo gurigeyga jiifo ayuu ayaan arkay Ciise Masiix oo carshigii ku fadhiyo. Waxaan ka baray inuu iga badbaadiyo dembigiisa faraha badan oo uu ka dhigo mid ka mid ah caruurtii Ilaah. Walaal anigu waxaan helay noolal cusub oo mar kale ayuu dhashay.
Si aan horey ugu akhrino Kitaabka Muujintii Ciise Masiix cutuubka 21:1-5aad.
Waxaan qoran sidatan “Oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub; waayo, samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen; oo baddiina mar dambe ma ay jirin. Oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah, taasoo ah Yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga Ilaah, iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay.
Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen.
Markaasaa kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi, Bal eeg, wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa. Oo wuxuu igu yidhi, Qor, waayo, erayadanu waa aamin iyo run”.
Anigu habeenkaasi ma usan jiifan sariirta ayuu ku gadgadoomay wakhtigii dheer. Dabadeena waxaan alifay qasiidaan magaceedu yahay Xalay baan Masiixii arkoo, xamdi baygu waajibayeey. Taasi oo anigu iyo kuwo kale oo faro badan aan u aragno in uu si dhab ah ula kulmay Ciise Masiix.
Waxaan hal aburkeygii ku bilabay aniga oo leh “Xumaantaydii buu u dhinto, xamdi baygu waajibayeey. Waa run walaal Ciise Masiix dembi uu asaga geystay uma usan geriyoon waayo Quraanka iyo Kitaabka Qoduuska ah ee Beybalkaba waxay inoo sheegayaan in uu wax dembi ah laheyn.
Kitaabka Yooxanaa cutubka 1:29 aad waxay leedahay sidatan. “Maalintii labaad Yooxanaa wuxuu arkay Ciise oo ku soo socda, oo wuxuu yidhi, Bal eega Wanka Ilaah ee dembiga dunida qaadaya”.
Yooxanaa wuxuu dadkii dhegeysanayey oo Yuhuudda ah oo aqoon wanagsan u lahaa Kitaabka Axdigii Hore waa Towreed iyo Sabuur xusuusinayaa habkii Alle baraiga iyo waq dhacaa. Markii u qof dembaabo waxay aheyn inay baraar aan wax iin ah laheyn waq dhacaa u bixiyaan. Wankaasi waxay aheyd in usan jiis aheyn, dhegna ka goneyne.
Markuu Yooxanaa wuu ku leeyahay Ciise Masiix “Wankii Ilaah ee qaadi lahaa dembiyadda dadka oo dhan. Wax uu leeyahay waxay tahay waa Ciise Masiix waa nadiif oo wax uu asaga geeystay uma dhiman. Waxaa iskutilabta loogu qodbay waxa weeye dembiga aan anigu iyo adigu galnay weeyaan.
Dembigu wuxuu dunidu ku soo galay Adam awgeesi markii uu Ilaah ku casiyey oo ay cuneen mirahii geedkii laga reebay. Lakiinse badbaadada waxay ku timaad Ciise Masiix taasi oo sameeyn ku yeelatay dadka oo dhan.
Kitaabka qoduuska ah wuxuu leeyahay sida ku qoran Kitaabka Rooma cautuubka 5:12-21aad.
Waxaan qoran sidatan “Dhimashada Waa Laga Helay Aadan, Noloshana Ciise Masiix.
Haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay, dhimashaduna dembiga ugu timid, sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan, waayo, waa la wada dembaabay; waayo, dembigu duniduu ku jiray intaan sharcigu iman, laakiin dembi lama tiriyo markii aan sharci jirin. Hase ahaatee waagii Aadan ilaa Muuse dhimashadu waxay u talisay xataa kuwii aan u dembaabin sidii xadgudubkii Aadan kan ah masaalka kan iman lahaa.
Hadiyaddu ma aha sida dembiga, waayo, haddii nin keliya dembigiis kuwa badanu u dhinteen, de in ka sii badan waxaa kuwa badan u badatay nimcada Ilaah iyo hadiyadda nin nimcadiis ku timid, kan ah Ciise Masiix. Hadiyaddu ma aha sida mid qof dembaabay ku timid, waayo, mid xukunkiis wuxuu keenay ciqaab, laakiin hadiyaddu waxay dembiyo badan ugu timid inay xaq ka dhigto kuwo badan. Haddii mid dembigiisa aawadiis ay dhimasho ku talisay midkaas aawadiis, de si ka badanna kuwa hela badnaanta nimcada iyo hadiyadda xaqnimada, noloshay ku dhex talin doonaan kii kale aawadiis kaas oo ah Ciise Masiix.
Haddaba dembiga nin keliya aawadiis waxaa dadka oo dhan ugu yimid xukun, sidaas oo kalena nin keliya xaqnimaduu sameeyey aawadeed waxaa dadka oo dhan ugu timid hadiyad in xaq laga dhigo oo ay noolaadaan. Waayo, sida nin keliya caasinimadiisii kuwa badan dembilayaal looga dhigay, sidaas oo kalena nin keliya addeeciddiis ayaa kuwa badan xaq looga dhigi doonaa. Sharciguna wuxuu u yimid inuu dembigu bato, laakiinse meeshii dembigu ku batay, nimcaduna way ka sii badatay aad iyo aad; in, sida dembigu dhimashada ugu taliyey, sidaas oo kalena ay nimcadu ugu taliso xaqnimo ilaa nolosha weligeed ah ee xagga Rabbigeenna Ciise Masiix”.
Walaal Anigu iyo Adigu dembigii aan u dhiman laheyn iyo deyntii aan gudi laheyn ayaa Ciise Masiix ku qodbatay iskutilabta si uu noqdo caro tirkeena oo anaga iyo Ilaah inoo heshiisiyo. Oo hadda mid kasta oo asaga rumeysto wuxuu heshiis la yahay Ilaah.
Masiix wuxuu u dhintay dembigaga iyo keyga. Wuxuuna awood ku leeyahay in uu Ilaah iyo annaga na nabdeysiiyo. Ciise Masiix wuu ku badbaadin karaa haddii aad weydiisato. Walaal maanta weydiiso aad heshiid saamaxaaddiisa.
Qeybta labaad ee qasidada waxay leedahay Xinjirtiisii buu igu dhaqoo, xamdi baygu waajibay. Murtid eragaasi waxay wafaqsan tahay erayda ku qoran kitaabka Quduuska ah ee Beybalka.
Markaynu eegay Axdigii Hore iyo Kan cusubba waxaan arkeynaa in Kitaabka leeyahay dhiig la’aantiis dembi dhaf ma laha. Axdiga Hore wuxuu lahaa macbuud iyo hab caabudaad ah. Markii uu qof dembi sameeyo waxay aheyd inuu keeno baraar aan wax iin ah laheyn, kaasi oo wadaadka qali jiray si dembi dhaf loogu bixiyo. Dhiigga neefka la qaley waxay aheyd in uu dhaboolo dembiga mid waq dhac bixiyey iyo weliba qaurunta reer binu Israa’iil oo dhan.
Axdiga cusubna wuxuu leeyahay dembiyada dadka oo dhan waxaa keli ah oo lagu cafin karaa waa dhigii Ciise Masiix ee iskutilabta lagu daadiyey.
Qoraagu Qasidaan sidii uu inoo sheegayba waa run Ciise Masiix markii uu dhameeyey howshii Samato bixinta wuxuu ka saro kacay dhimashadii.
Walaal bal aan akhrino Kitaabka Korintooska kowaad 15:1-6aad.
Waxaan qoran sidatan “Walaalayaalow, waxaan idin ogeysiinayaa injiilka aan idinku wacdiyey, oo aad idinkuna aqbasheen, oo aad ku taagan tihiin, oo aadna ku badbaaddeen, haddaad xajisaan hadalkii aan idinku wacdiyey, haddaydnan micnela’aan u rumaysan. Waayo, markii ugu horraysay waxaan idiin dhiibay waxaan aniguba helay, oo waxa weeye, Masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida Qorniinku leeyahay, waa la aasay isaga, oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey, sida Qorniinku leeyahay. Markaasuu Keeyfas u muuqday, markii dambena laba iyo tobankii. Markaasuu wuxuu mar keliya u muuqday kuwo ka badan shan boqol oo walaalo ah, kuwo weli intoodii badnayd ay hadda joogto, laakiin qaar baa dhintay”.
Mid kale qaoragu wuxuu leeyahay Xertiisii ayaa aragtoo, xamdi baygu waajibayeey. Taani macnaheedu waxay tahay “Gortaasuu Yacquub u muuqday, markaas rasuullada oo dhan. Markii ugu dambaysayna aniga oo dhicis oo kale ah, ayuu ii muuqday. Waayo, anigu waxaan ahay kan rasuullada u liita oo aan istaahilin in loogu yeedho rasuul, waayo, kiniisadda Ilaah baan silcin jiray”.
Waxaa kale oo aan qoran aniga oo leeyahay “ Xumaatoo dhan buu iga tairo, xamdi baygu waajibayeey”
Waxa kale oo aan ka sheegayo sheegayo waa run, Ciise Masiix wuxuu dhintay dembigeena oo dhan. Dhiggiisana wuxuu iga daahiriye dembiga galanay oo dhan.
Bal aan akhrino Kitaabka Galatiya cutuubka 1:3-4aad.
Waxaan qoran sidatan “Nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix, kan naftiisii u bixiyey dembiyadeenna aawadood, si uu inooga bixiyo dunidatan la joogo oo sharka leh sida ay tahay doonista kan Ilaah iyo Aabbe inoo ah”.
Kitaabka Matayoos cutuubka 1:20-21aad ayaduuna waxay leedahay sidatan “Laakiin intuu waxan ka fiirsanayay ayaa malaa’igtii Rabbigu riyo ugu muuqatay, iyadoo leh, Yuusuf ina Daa’uudow, ha ka baqin inaad naagtaada Maryan qaadatid, waayo, waxa ay uuraysatay ayaa Ruuxa Quduuskaa ka yimid. Oo waxay umuli doontaa wiil, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise, waayo, dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa.
Beydka kalana waxaan yidhi “jannadaan la soo xarmadoo, xamdi baygu waajibayeey” waxaa uu leeyahay waxaan noqday mid dembigiisi oo dhan la caafiyey oo jannada Ilaah kula noolaan doono. Wuxuu kale leeyahay cadaabtii xur baan ka ahay. Waayo qoraagu waa, qof markii uu dhinto hubo in uu janno galayo. Waayo wuxuu leeyahay lay xisaabin mayo, waayo Ciise Masiix ayaa ku dhintay dembigiisi oo dhan.
Bal aan ku soo gabgabeyno in aan wax ka akhrino Kitaabka Rooma cutuubka 8:1-4aad.
Waxaan qoran sidatan “ Sidaas daraaddeed, kuwa Ciise Masiix ku dhex jiraa, haatan xukun ma laha. Waayo, qaynuunka Ruuxa nolosha ee ku dhex jira Ciise Masiix ayaa iga xoreeyey qaynuunka dembiga iyo dhimashada. Waayo, wax aan sharcigu samayn karayn, maxaa yeelay, wuu itaaldarnaa jidhka aawadiis, ayaa Ilaah sameeyey isagoo Wiilkiisa ku soo diraya u-ekaantii jidhka dembiga leh oo u soo diraya dembiga aawadiis, wuxuuna xukumay dembigii jidhka ku jiray, in qaynuunka sharcigu inagu buuxsamo kuweenna aan sida jidhka u socon, laakiinse u socda sida Ruuxa.
Walaal haddii aad adigu maanta Ciise Masiix dembigaga u qirato wuu ku samaxayaa oo ka badbaadinayaa dembigaga oo dhan, amiin asaga si aad u hesho noolal da’imiis ah.
Posted in All resources, Markhaatifur, QoraalTagged markhaatifur